DAAWO: Wasaaradda Arrimaha gudaha oo ku baaqday joojinta colaadda gobolka Hiiraan – Radio Muqdisho
DAAWO: Wasaaradda Arrimaha gudaha oo ku baaqday joojinta colaadda gobolka Hiiraan
Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Federaalka Soomaaliya, ayaa baaq nabadeed u dirtay beelaha ood wadaaga ah ee ku dagaalamay magaalada Beladweyne ee xarunta Gobolka Hiiraan.
Afhayeenka Wasaaradda Arrimaha gudaha iyo Federaalka Cabdifataax Daahir Mire oo la hadlay Warbaahinta Qaranka ayaa sheegay in ka Wasaarad ahaan ay ku baaqayaan joojinta dagaalada ka dhacay magaalada Beladweyne, isla markaana ay ka xunyihiin dirirta ka dhacday Beladweyne.
“Waxaan aad uga xunnahay dirirta ka dhacday Beladweyne, runtii waxaan ku baaqeynaa in la joojiyo dagaalka oo waxkasta lagu dhameeyo wada hadal, tankale odoyaasha dhaqanka, saraakiisha ciidanka iyo Maamulka gobolka uga mahadcelineynaa dadaalka ay u galeen joojinta dagaalka” ayuu yiri Afhayeenka.
Dhanka kale afhayeenka ayaa xusay in meelaha cadowga laga kiciyay la gaarsiiyay deeq raashin ah, isagoo intaa ku daray inay dadaal ugu jiraan sidii dib loo soo nooleyn lahaa adeegyada guud ee bulshada.
West Ham iyo Manchester United oo Bareejo Ku Kala Baxay “SAWIRRO”